.Live Sale အမြဲရောင်းပေးနေကျ ရတနာဆိုင်မှ သူမကြိုက်နေတဲ့ LV ပုံစံ တန်ဖိုးကြီးစိန်နားကပ်တရံ လက်ဆောင်ပေးလို့ ပါးစပ်မစေ့နိုင်အောင် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်. – Askstyle
.Live Sale အမြဲရောင်းပေးနေကျ ရတနာဆိုင်မှ သူမကြိုက်နေတဲ့ LV ပုံစံ တန်ဖိုးကြီးစိန်နားကပ်တရံ လက်ဆောင်ပေးလို့ ပါးစပ်မစေ့နိုင်အောင် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်.
Live Sale အၿမဲေရာင္းေပးေနက် ရတနာဆုိင္မွ သူမႀကိဳက္ေနတဲ့ LV ပံုစံ တန္ဖုိးႀကီးစိန္နားကပ္တရံ လက္ေဆာင္ေပးလုိ႔ ပါးစပ္မေစ့ႏုိင္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ ႏိွဳင္းယွဥ္ျမင့္မုိရ္..
ပရိသတ္ႀကီးေရႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့ ျမန္မာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားပရိသတ္ေတြမသိသူမရွိေလာက္တဲ့ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရန္တစ္ေယာက္ပါပဲေနာ္။ အႏုပညာနယ္ပယ္မွာက်င္လည္ေနတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး က်ရာဇာတ္ေကာင္​ေ​တြကို ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိူင္လြန္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။
ဟာသျဖစ္ျဖစ္အၾကမ္းအရမ္းျဖစ္ျဖစ္ မင္းသားမင္းသမီးေတြရဲ႕ ေဘးကေန ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပး တတ္တဲ့ ဇာတ္ရံေကာင္းတစ္ဦးလို႔ဆိုရမွာပါ။
အခုလိုcovid ကာလမွာ အိမ္မွာပဲ Stay Homeေနေနၾကရတာေၾကာင့္ အႏုပညာ ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာဆိုရင္႐ိုက္ကူးေရးေတြရပ္နားထားေပမယ့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့ Online ေစ်းေရာင္းတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အရမ္းကို ေရာင္းေကာင္းၿပီး ရက္လြတ္ေတြမရွိေအာင္ မအားမလပ္နဲ႔ျဖစ္ေလာက္ ထိပါပဲေနာ္။
အလႉအတန္းေတြလည္းဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး အိမ္အႀကီးႀကီးကိုလည္းCovidကာလမွာဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ဇန္နဝါရီလ၂၄ရက္ေန႔ကေတာ့ သူမရဲ႕ အသက္၃၇ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးျဖစ္ၿပီး ”ႏႈိင္းရွင္ေမြးေန႔မွာ ႏႈိင္းရွင္ႀကိဳက္တဲ့LV စိနိနားကပ္ေလးကို ျမတ္မြန္ရတနာမွ ခ်စ္ရတဲ့ ျဖဴေခ်ာက လက္ေဆာင္ေပးတယ္
ႏႈိင္းရွင္ကို အၿမဲဂ႐ုစိုက္တယ္ဘယ္ေတာ့မွ လက္တြဲမျဖဳတ္ခ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုစိတ္ေတြေၾကာင့္…စလက္တြဲတဲ့ 1.7.2020မွ မေန႔က Live ထိမေရာင္းရပဲ ျပန္ရတဲ့ေန႔တရက္မွ မရွိခဲ့ဘူးး
ဒီ့ထက္ပိုႀကိဳးစားေပးပါ့မယ္ျမတ္မြန္ရတနာနဲ႔ ျဖဴေခ်ာလည္း ဒီ့ထက္ပိုေအာင္ျမင္ပါေစ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ တန္ဖိုးႀကီးစိန္နားကပ္လက္ေဆာင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္းသာစြာေျပာျပခဲ့တာပါ။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ုမင့္မိုရ္အတြက္ဆုေတာင္ းစကားေျပာခဲ့ေပးပါဦးေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Live Sale အမြဲရောင်းပေးနေကျ ရတနာဆိုင်မှ သူမကြိုက်နေတဲ့ LV ပုံစံ တန်ဖိုးကြီးစိန်နားကပ်တရံ လက်ဆောင်ပေးလို့ ပါးစပ်မစေ့နိုင်အောင် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်..
ပရိသတ်ကြီးရေနှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပရိသတ်တွေမသိသူမရှိလောက်တဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်တစ်ယောက်ပါပဲနော်။ အနုပညာနယ်ပယ်မှာကျင်လည်နေတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ကောင်တွေကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိူင်လွန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ဟာသဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းအရမ်းဖြစ်ဖြစ် မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ ဘေးကနေ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေး တတ်တဲ့ ဇာတ်ရံကောင်းတစ်ဦးလို့ဆိုရမှာပါ။
အခုလိုcovid ကာလမှာ အိမ်မှာပဲ Stay Homeနေနေကြရတာကြောင့် အနုပညာ ရှင်တော်တော်များများ ဟာဆိုရင်ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်နားထားပေမယ့် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ Online ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အရမ်းကို ရောင်းကောင်းပြီး ရက်လွတ်တွေမရှိအောင် မအားမလပ်နဲ့ဖြစ်လောက် ထိပါပဲနော်။
အလှူအတန်းတွေလည်းဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အိမ်အကြီးကြီးကိုလည်းCovidကာလမှာဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ၂၄ရက်နေ့ကတော့ သူမရဲ့ အသက်၃၇နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပြီး ”နှိုင်းရှင်မွေးနေ့မှာ နှိုင်းရှင်ကြိုက်တဲ့LV စိနိနားကပ်လေးကို မြတ်မွန်ရတနာမှ ချစ်ရတဲ့ ဖြူချောက လက်ဆောင်ပေးတယ်
နှိုင်းရှင်ကို အမြဲဂရုစိုက်တယ်ဘယ်တော့မှ လက်တွဲမဖြုတ်ချခဲ့ဘူးအဲ့လိုစိတ်တွေကြောင့်…စလက်တွဲတဲ့ 1.7.2020မှ မနေ့က Live ထိမရောင်းရပဲ ပြန်ရတဲ့နေ့တရက်မှ မရှိခဲ့ဘူးး
ဒီ့ထက်ပိုကြိုးစားပေးပါ့မယ်မြတ်မွန်ရတနာနဲ့ ဖြူချောလည်း ဒီ့ထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ တန်ဖိုးကြီးစိန်နားကပ်လက်ဆောင်ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝမ်းသာစွာပြောပြခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နှိုင်းယှဉ်ုမင့်မိုရ်အတွက်ဆုတောင် းစကားပြောခဲ့ပေးပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။